Qaraxyo Miino oo Amxaaradda lagula eegtay Baladweyne | KEYDMEDIA ONLINE
Qaraxyo Miino oo Amxaaradda lagula eegtay Baladweyne
Baladweyne (Keydmedia ) - Wararka laga helayo magaalada Baladweyne ee Xaruunta Gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayan in saakay gudaha magaaladaasi Qaraxyo khasaaro geestay lagula eegtay Gaadiid ay wateen Ciidanka Amxaaradda.
Goobjoogiyaal ayaa u xaqiijiyay Keydmedia in Labo Qarax oo Miino ah saakay lagula eegtay Kolonyo at la socdeen Amxaaradda wado ku taalla Xaafadda Howlwadaag gaar ahaan Laanta Heegan,waxaana Goobjoogiyaashu ay intaasi ku dareen inay arkeen meydadka iyo Dhaawacyada Askar fara badan oo goobta laga daad guraynayo.
Lama oga Khasaaraha rasmiga ah ee kasoo gaaray Amxaaradda qaraxyadaasi Miino,Maadaama Ciidanka ay isku gadaameen Goobta oo rasaastana ay dhan kasta u ridayaan,waxaana ay wadaan baaritaano xooggan oo ku aadan Cidda ka dambeysa qaraxaasi.
Qaraxyada oo ahaa kuwa dhulka lagu aaso ayaa waxaa Ciidamada Amxaaradda lala eegtay xilli ay biyo u doonanayeen Ceelal ku yaala xaafadda Howlwadaag ee Galbeedka Beledweyne.
Ma jirto Cidda sheegatay qaraxyadaasi ilaa hadda, balse waxaa gabi ahaanba ay Ciidamada Amxaaradda ay xireen isu socodka Gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqii Gacansi ee ka jiray Magaalada.